Eksodus 26 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
26 “Ke umnquba uze uwenze ngamalaphu entente alishumi,+ elinen ecikizekileyo ephothiweyo, nangemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa.+ Uze wenze neekherubhi,+ uziluke ngobugcisa. 2 Ubude belaphu lentente ngalinye boba ziikubhite ezingamashumi amabini anesibhozo buze bona ububanzi belaphu lentente ngalinye bube ziikubhite ezine. Onke la malaphu entente mawalingane.+ 3 Amalaphu amahlanu entente ohlanganiswa elinye nelinye, namanye amalaphu entente amahlanu ahlanganiswe elinye nelinye.+ 4 Yaye uze wenze amarhintyela ngomsonto oluhlaza emphethweni welinye ilaphu lentente elisekupheleni; uze nakwicala elingaphaya wenze okufanayo emphethweni welaphu lentente elisekugqibeleni.+ 5 Uze wenze amarhintyela angamashumi amahlanu kwelinye ilaphu lentente, uze nakwelinye ilaphu lentente elimalunga nalo, ngasekupheleni, wenze amarhintyela angamashumi amahlanu.+ 6 Wenze namagwegwe egolide angamashumi amahlanu uze uwahlanganise amalaphu entente elinye kwelinye ngamagwegwe lawo, ibe ngumnquba omnye.+ 7 “Uze wenze amalaphu ngoboya bebhokhwe+ abe yintente phezu komnquba. Uwenze amalaphu entente lawo abe lishumi elinanye. 8 Ubude belaphu lentente ngalinye boba ziikubhite ezingamashumi amathathu,+ buze bona ububanzi belaphu lentente ngalinye bube ziikubhite ezine. Loo malaphu entente alishumi elinanye mawalingane. 9 Wowahlanganisa odwa amalaphu entente amahlanu namalaphu entente amathandathu odwa,+ uze elesithandathu ilaphu lentente uliphinde kubini ngaphambi kwentente. 10 Wenze amarhintyela angamashumi amahlanu emphethweni welinye ilaphu lentente, elisekupheleni, uze nakwelinye icala wenze amarhintyela angamashumi amahlanu emphethweni welaphu lentente. 11 Uze wenze amagwegwe obhedu abe ngamashumi amahlanu,+ uwafake amagwegwe emarhintyeleni lawo, uyihlanganise intente, ibe nye.+ 12 Oko kuseleyo emalaphini lawo entente koba lilengalenga. Sothi isiqingatha selaphu lentente eliseleyo sijingiswe ngasemva komnquba. 13 Yothi ikubhite kweli cala nekubhite kweliya icala, eseleyo kubude bamalaphu entente, ibe ngamalengalenga emacaleni omnquba, awugubungele macala. 14 “Uze uyenzele isigubungelo intente ngeemfele zeenkunzi zeegusha ezidaywe zabomvu nesigqubuthelo sesikhumba sentini ngaphezulu. 15 “Umnquba uze uwenzele amanqwanqwa amaplanga+ ngomthi womnga, amiswe. 16 Ubude benqwanqwa lamaplanga boba ziikubhite ezilishumi, buze bona ububanzi benqwanqwa lamaplanga ngalinye bube yikubhite enesiqingatha. 17 Inqwanqwa leplanga ngalinye loba neempondlo ezimbini, zihlangene olunye nolunye. Wenjenjalo kuwo onke amanqwanqwa amaplanga omnquba. 18 Ekuwenzeni kwakho amanqwanqwa amaplanga omnquba, mawabe ngamashumi amabini amanqwanqwa amaplanga kwicala laseNegebhi, ngasemzantsi. 19 “Uze wenze iziseko zesilivere zibe ngamashumi amane+ phantsi kwaloo manqwanqwa amaplanga angamashumi amabini; zibe zibini iziseko phantsi kwenqwanqwa lamaplanga elinye neempondlo zalo ezimbini, nezinye iziseko ezibini phantsi kwelinye inqwanqwa lamaplanga neempondlo zalo ezimbini. 20 Kwelinye icala lomnquba, elingasemantla, aya kuba ngamashumi amabini amanqwanqwa amaplanga,+ 21 neziseko zawo zesilivere zibe ngamashumi amane, zibe zibini iziseko phantsi kwenqwanqwa lamaplanga lilinye, kwanezinye iziseko ezibini phantsi kwelinye inqwanqwa lamaplanga.+ 22 Wona amacandelo asemva komnquba ngasentshonalanga wowenzela amanqwanqwa amaplanga amathandathu.+ 23 Amanqwanqwa amabini amaplanga uze uwenze abe zizibonda zembombo zomnquba+ kumacandelo awo amabini angasemva. 24 Mawadityaniswe ukusuka ezantsi kuse phezulu, adityaniswe ngekhonkco lokuqala. Koba njalo kuwo omabini. Wona aya kuba zizibonda zembombo zombini. 25 Aya kuba ngamanqwanqwa amaplanga asibhozo neziseko zawo zesilivere, zibe ziziseko ezilishumi elinesithandathu, zibe zibini iziseko phantsi kwenqwanqwa leplanga lilinye, kwanezinye iziseko ezibini phantsi kwelinye inqwanqwa leplanga. 26 “Uze wenze imivalo ngomthi womnga,+ ibe mihlanu kumanqwanqwa amaplanga akweli cala lomnquba, 27 neminye imivalo emihlanu kumanqwanqwa amaplanga akwelinye icala lomnquba, kwaneminye imivalo emihlanu kumanqwanqwa amaplanga akwicala lomnquba elikumacandelo amabini angasemva ngasentshona.+ 28 Umvalo ophakathi esazulwini senqwanqwa lamaplanga mawunqumleze ususele ekupheleni use ekupheleni. 29 “Uze uwaleke amanqwanqwa amaplanga ngegolide,+ namakhonkco awo okuxhasa imivalo uze uwenze ngegolide; nemivalo leyo uze uyaleke ngegolide. 30 Yaye uze uwumise umnquba ngokokuyilwa kwawo okubonisiweyo entabeni.+ 31 “Uze wenze ikhuselo+ ngemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa nangelinen ecikizekileyo, ephothiweyo. Wolenzela iikherubhi,+ uziluke ngobugcisa. 32 Uze ulixhome ezintsikeni ezine zomnga ezalekwe ngegolide. Izikhonkwane zazo zibe zezegolide. Ziya kuma phezu kweziseko zozine zesilivere. 33 Wolixhoma ikhuselo emagwegweni uze uyingenise ityeya yesingqino+ ngaphaya kwekhuselo; lothi ke ikhuselo linahlukanisele phakathi kweNgcwele+ neYona Ngcwele.+ 34 Yaye uze usibeke isigubungelo phezu kwetyeya yesingqino kweYona Ngcwele. 35 “Uze uyimise itafile ngaphandle kwekhuselo, size isiphatho sezibane+ sibe malunga netafile ngakwicala lomnquba ngasemzantsi; yona itafile woyibeka ngakwicala langasentla. 36 Umnyango wentente uze uwenzele umkhusane+ ngemisonto eluhlaza nangoboya obudaywe bamfusa bubomvu nangomchako omfusa nangelinen ecikizekileyo ephothiweyo, yalukwa. 37 Umkhusane lowo uze uwenzele iintsika zibe ntlanu ngomnga, uzaleke ngegolide. Izikhonkwane zazo zibe zezegolide. Yaye uze uzityhidele iziseko zobhedu zibe zihlanu.